Agyede no Ma Yenya Daa Nkwa— Akyɛde a Ɛso Bi Nni
Akyɛde a Ɛso Bi Nni
PAPA bi kyɛɛ abofra bi a yɛfrɛ no Jordan ade sɛ ɔmfa nsensen ne pɛnsere. Ná ɛyɛ ade ketewaa bi a ɛte sɛ hyɛmma. Ɛwom sɛ ɛnyɛ ade kɛse biara saa deɛ, nanso yɛka akyɛde a ɛda abofra yi koma so paa a, wei yɛ emu baako. Seesei saa abofra no anyin. Nea ɔkyɛɛ abofra no ade no, na yɛfrɛ no Russell. Jordan kaa sɛ: “Meyɛ abofra no na Russell de akyɛde yi maa me. Ná ɔbɛn yɛn abusua paa.” Russell yɛɛ biribi titiriw wɔ Jordan maame, ne papa ne ne nanabarima asetenam. Bere biara a wɔbɛkɔ ahohia mu nso, na ɔhyɛ wɔn den. Russell wui ansa na Jordan rehu wei nyinaa. Jordan toaa so sɛ, “Seesei, mahu nneɛma pii afa Russell ho, ama akyɛde ketewaa yi asom bo ama me paa.”
Jordan asɛm yi ma yehu sɛ, ɛtɔ da a, nnipa bebree mmu akyɛde bi sɛ ɛyɛ biribi titiriw biara. Nanso wobɛhwɛ no, na nea yɛde maa no no deɛ ɛsom bo ma no paa, na biribiara nni hɔ a ɔde bɛsesa. Bible ka akyɛde bi ho asɛm sɛ ɛso bi nni. Ɛka sɛ: “Onyankopɔn dɔ wiase paa ma enti ɔde ne Ba a ɔwoo no koro no mae, na obiara a ɔkyerɛ no mu gyidi no ansɛe na mmom wanya daa nkwa.” (Yohane 3:16) Nkurɔfo nim Bible mu asɛm yi paa.
Sɛ obi nya saa akyɛde yi a, obetumi anya daa nkwa! Akyɛde bɛn paa na ɛso sen wei? Ɛwom sɛ ebinom mmu saa akyɛde yi deɛ, nanso nokware Kristofo deɛ, “ɛsom bo” ma yɛn paa. (Dwom 49:8; 1 Petro 1:18, 19) Ɛnde adɛn nti na Onyankopɔn de ne Ba no nkwa maa wiase no sɛ akyɛde?
Ɔsomafo Paulo asɛm yi ma yehu nea enti a ɛte saa: “Ɛnam onipa biako so na bɔne baa wiase, na owu nam bɔne so bae, ma owu trɛw kaa nnipa nyinaa.” (Romafo 5:12) Adam ne onipa a odi kan, na ɔhyɛɛ da yɛɛ asoɔden tiaa Onyankopɔn. Wei kɔfaa owu brɛɛ no. Adam de owu awo n’asefo nyinaa. Enti owu abɛda amansan kɔn mu.
“Bɔne akatua ne owu, na akyɛde a Onyankopɔn de ma ne daa nkwa a ɛnam yɛn Awurade Kristo Yesu so.” (Romafo 6:23) Nea ɛbɛma nnipa ade wɔn ho afi owu ho no, Onyankopɔn somaa ne Ba Yesu Kristo baa asase so maa ɔde ne nkwa a ɛyɛ pɛ no bɛbɔɔ afɔre maa nnipa. Saa afɔre no, yɛfrɛ no “agyede.” Agyede yi nti, wɔn a wɔbɛkyerɛ sɛ wogye Yesu di nyinaa benya daa nkwa.—Romafo 3:24.
Nhyira pii a Onyankopɔn nam Yesu Kristo so de bɛma wɔn a wɔsom Onyankopɔn no, Paulo kaa ho asɛm sɛ: “Aseda nka Onyankopɔn wɔ n’akyɛde a enni kabea no ho.” (2 Korintofo 9:15) Anokwa, sɛnea agyede no som bo no, yɛrennya nsɛm mpo mfa nkyerɛ mu. Akyɛde pii na Onyankopɔn de adom adesamma. Adɛn nti na agyede no nko ara yɛ soronko? Akyɛde a Onyankopɔn de ama nnipa nyinaa no, dɛn na ɛma agyede no da mu fua? * Dɛn na yɛbɛyɛ de akyerɛ sɛ yɛn ani sɔ? Wopɛ sɛ wuhu nea Bible aka wɔ nsɛmmisa yi ho a, ɛnde hwɛ nsɛm mmienu a edidi so no.
^ nky. 8 Ɛwom Yesu fii ne komam de “ne kra too hɔ maa yɛn.” (1 Yohane 3:16) Nanso Onyankopɔn na ɔhyehyɛɛ sɛ ommewu mma yɛn, enti nsɛm a edidi so no bɛma yɛahu nea Onyankopɔn yɛ maa yɛn nsa kaa agyede no.